U Win Naing appointed as Myanmar Ambassador to Islamic Republic of Pakistan – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Win Naing appointed as Myanmar Ambassador to Islamic Republic of Pakistan
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Win Naing, Director General of the International Organizations and Economic Department, Ministry of Foreign Affairs, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Islamic Republic of Pakistan.
Dated. 25 January 2014
သ တင်း ကြေညာချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းနိုင်အား ပါကစ္စတန်အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်